Indawo kaPoppy Nannup. ukuzimela. I-wifi yasimahla
Ekuqaleni yenye yeevenkile zokuqala eNannup kwaye ngoku iyinxalenye yeNannup Heritage Trail. Le ndlu intle inomtsalane wakudala wehlabathi enazo zonke iimpawu zantlandlolo ezinje ngolwimi kwiindonga zeplanga kunye neesilingi eziphakamileyo, imigangatho yejarrah, ikhitshi elipholileyo elineemitha ezihonjisiweyo zesitovu, indawo yokuhlambela yentsimbi yasekuqaleni kunye ne-pedestal sink, ijarrah, i-tin ecinezelweyo kunye ne-zincalume. . Kufana nokungena kunyaka odlulileyo. Iifenitshala ziyindlela yokuzonwabisa ye-retro-chic kwigumbi ngalinye.
Le ndlu yelifa lemveli ikwiziko ledolophu yaseNannup nje umzuzu o-1 ukusuka kwiivenkile zokutyela kunye neevenkile kwaye yimizuzu engama-40 kuphela yokuqhuba ukuya kwiidolophu zabakhenkethi ezinje ngoMargaret River, BalingupPemberton.
Iveranda engaphambili yePoppy's Place ivuleleka kwisitrato esikhulu kwaye iyintandokazi kwiindwendwe zethu. Yindawo entle yokuhlala kwaye uya kuziva uyinxalenye yoluntu ngelixa uphunga ikomityi yeti.
Zive amandla amangalisayo kwaye uthandane nale cottage intle, ii-quirks kunye nazo zonke.
I-cottage inamagumbi okulala amathathu kwaye ilala abantu aba-5 ngokukhululeka. Indlu yangasese yahlukile kwigumbi lokuhlambela.
Kukho inqanaba lokungena kwindawo yokuhlamba iimpahla / kwigumbi lokuhlambela kwaye kufuneka ungene kwindawo yokuhlambela ukuze uhlambe.
Kukho indawo ngasemva kweyadi yomdlalo weqakamba okanye yokujula ibhola.
Umphambili wendlu ubiyelwe ukusuka endleleni, nangona kunjalo akukho cingo ngasemva kwipropati.
Cinga nje ngeNannup njengedolophu yelizwe elinqabileyo ... umoya ococekileyo kunye nokuhlala okunempilo kufutshane nendalo, amahlathi kunye nobuninzi bobomi beentaka.
Ikhaya likwisitrato esikhulu ngoko ke umxube weendawo zokuhlala kunye nezorhwebo kufutshane. Kukutsiba, ukutsiba kunye nokutsiba kumbindi weNannup apho uya kufumana iivenkile, iipub zembali kunye neekhefi. Kungcono usengumzuzu kude kwindlela yokuhamba yoMlambo iBlackwood ikuhambisa kwindalo ngokugqibeleleyo.
Isitalato esikhulu sikaNannup siyathandeka kodwa sikwindawo yonke kwaye ngokuqinisekileyo uya kudibana nabalinganiswa abathile.
I-cottage ikwindawo yokuhlala, ke akukho ngxolo emva kwe-10pm okanye amaqela nceda.
Sihlala kwikona kwaye ziyafumaneka ukuba uyasifuna.